Akira: UI နှင့် UX ဒီဇိုင်းအတွက် Open source Linux native application Linux မှ
Akira: UI နှင့် UX ဒီဇိုင်းအတွက် open source Linux native application
Linux Post Install လုပ်ပါ | 25/09/2021 06:00 | applications များ, GNU / Linux များ
၏ရိယာ၌ ဒီဇိုင်းနှင့် programming, အဖြစ်လူသိများသည်အရာရှိ၏ UX (အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ) y UI (User Interface)မရ။ အသုံးအနှုန်းနှစ်ခုလုံးသည်ဆင်တူသောအမည်များရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်။ စစချင်းကတည်းကရည်ညွှန်းသည် အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံနှင့်ခံစားရသည်အခြားတစ်ဖက်သည်ပိုမိုဆင်ခြင်တုံတရားရှိသောဘက်သို့ ဦး တည်သည် ဖန်တီးထားသောလမ်းကြောင်း / စူးစမ်းလေ့လာမှု.
ဧကန်အမှန်များစွာသော UX / UI အတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာများ သား ပုဂ္ဂလိကနှင့်စီးပွားဖြစ်ဒါပေမယ့်ကြီးကြီးမားမားတွေမရှိဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး အခမဲ့၊ ဖွင့်သို့မဟုတ်အခမဲ့အက်ပ်များ ရနိုင်ပါတယ်။ ကိစ္စလိုမျိုးပေါ့ Akira.
Multimedia Distro ကို GNU / Linux ပေါ်မှာဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ
ကျွန်ုပ်တို့၏အချို့ကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်စိတ် ၀ င်စားသူများအတွက် ယခင်ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ applications များ၏ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူ မာလ်တီမီဒီယာဤပစ္စုပ္ပန်ထုတ်ဝေမှုကိုဖတ်ပြီးနောက်အောက်ပါလင့်ခ်ကိုနှိပ်နိုင်သည်။
"မာတီမီဒီယာတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးပရိုဂရမ်အချို့ (ဗီဒီယို၊ အသံ၊ တေးဂီတ၊ ပုံများနှင့် 2D / 3D လှုပ်ရှားမှုများ) ကိုမူပိုင်ခွင့်နှင့်ပေးချေထားပြီး၎င်းကိုအမျိုးအစားတူ Operating Systems များတွင်သာတွေ့နိုင်သည်။ လောလောဆယ် GNU Applications Ecosystem / Linux တွင် မာတီမီဒီယာတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်းအတွက်ကျယ်ပြန့်ပြီးကောင်းမွန်သော application များစာရင်း" သင်၏ GNU / Linux ကိုအရည်အသွေးမြင့်မားသော Multimedia Distro အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပါ
သင်၏ GNU / Linux ကိုအရည်အသွေးမြင့်မားသော Multimedia Distro အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပါ
1 Akira: Vala နှင့် GTK တို့ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော Multiplatform App
1.1 Akira ဆိုတာဘာလဲ။
Akira: Vala နှင့် GTK တို့ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော Multiplatform App
ယင်း၏အတွက် GitHub ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်လျှောက်လွှာကိုအောက်ပါအတိုင်းအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပါသည်။
"Vala နှင့် GTK ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသော UI နှင့် UX ဒီဇိုင်းအတွက် Native Linux application ။"
"Akira သည် Vala နှင့် GTK ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသောဇာတိ Linux ဒီဇိုင်း application ဖြစ်သည်။ Akira သည် web ဒီဇိုင်းနှင့်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာများကိုအဓိက ဦး တည်သော UI နှင့် UX Design ကိုခေတ်မီမြန်ဆန်သောချဉ်းကပ်မှုပေးနိုင်ရန်အာရုံစိုက်သည်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ Linux ကို၎င်းတို့၏အဓိကလည်ပတ်မှုစနစ်အဖြစ်သုံးလိုသောဒီဇိုင်းနာများအတွက်မှန်ကန်ပြီးကျွမ်းကျင်သောဖြေရှင်းချက်ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ AKIRA သည်အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။ Alpha ကိုအခမဲ့ download လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကူညီစမ်းသပ်ကြည့်ပါ။"
ယင်း၏အကြား အပြောင်မြောက်ဆုံးစွမ်းဆောင်ချက် ၁၀ ချက် အောက်ပါဖော်ပြခဲ့တဲ့နိုင်ပါသည်
အရည်အသွေးမဆုံးရှုံးဘဲအပြည့်အဝအရွယ်အစားပြောင်းနိုင်သော vector canvas ကိုပေးသည်။
၎င်းတွင်ရွေးချယ်ထားသောအရာ၏တည်းဖြတ်နိုင်သောဝိသေသလက္ခဏာများကိုပြသောစမတ်ရွေးချယ်မှု panel တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
၎င်းတွင် drag and drop လုပ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့ကိုပါးနပ်စွာစီစဉ်ပေးနိုင်သည့်အလွှာ panel တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
ဒီဇိုင်းပုံစံများနှင့်အမြင်များကိုပိုမိုစုစည်းရန် artboards များဖန်တီးပါ။
စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သော icon များအစုံပါဝင်သည်။
Canvas စာကြည့်တိုက်ဗိသုကာ၏ပြီးပြည့်စုံသောပြန်လည်တည်ဆောက်မှုပါ ၀ င်သည်။
၎င်းတွင် pixel grid ကိုအကောင်အထည်ဖော်သည်။
pixel grid အရောင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပေးသည်။
၎င်းသည် smart fit လမ်းညွှန်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ပေးသည်။
သင်လုပ်နိုင်သည် install, run နှင့် uninstall လုပ်ပါ ကိုသုံးနိုင်သည် Snap အထုပ်မန်နေဂျာ, အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
ဒါဟာအစရှိနိုင်ပါသည် install, run နှင့် uninstall လုပ်ပါ ကိုသုံးနိုင်သည် Flatpak အထုပ်မန်နေဂျာ, အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
အကောင်းဆုံးတွေထဲမှာ အခမဲ့၊ ပွင့်လင်းပြီးအခမဲ့အခြားနည်းလမ်းများaAkira ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါ ၁၀ ခုကိုဖော်ပြနိုင်သည်။
တိုတိုပြောရရင် Akira cross-platform ဒီဇိုင်း application တစ်ခုဖြစ်သည် UI နှင့် UX အခမဲ့နှင့် open source ဘာတွေရေးထားလဲ Vala နှင့် GTKကို၎င်း၊ အောက်၌လွှတ်သည် GNU အထွေထွေအများသုံးလိုင်စင် v3.0မရ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အသုံးဝင်ပြီးအခမဲ့ tool တစ်ခုဖြစ်သည် ဝဘ်ဒီဇိုင်းနာများနှင့်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနာများ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Akira: UI နှင့် UX ဒီဇိုင်းအတွက် open source Linux native application
Diego Vallejo နေရာလွတ် ဟုသူကပြောသည်
လွန်ခဲ့တဲ့4ရက်သတ္တပတ်
Diego Vallejo အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ Diego ။ မင်းရဲ့မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Akira တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည်နှင့်အမျှ GNU / Linux အတွက်ပိုမိုစံပြုသော package ပုံစံများပါလာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သေချာပေါက်မျှော်လင့်ကြပါစို့။
KDEApps6: Multimedia Field တွင် KDE Community Applications များ
Chrome 94 ရှိ Idle detection API သည်ဝေဖန်မှုလှိုင်းတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့သည်